| Royale ထိပ်တိုက်တွေ့ APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Royale ထိပ်တိုက်တွေ့
Royale APK ကိုထိပ်တိုက်တွေ့
အဆိုပါ Arena Enter! Clan ၏တိုက်ပွဲများ၏ဖန်တီးသူကနေ Royal, သင့်အကြိုက်ဆုံးတိုက်ပွဲများဇာတ်ကောင်တွေနဲ့အများကြီး, အများကြီးပိုသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးကို real-time multiplayer ဂိမ်းလာသည်။
မှူးမတ်, Knights, ကလေးနဂါးနှင့်ပိုပြီး: အသင်သိ Clan တပ်များ, စာလုံးပေါင်းနှင့်ကာကွယ်ရေး၏တိုက်ပွဲများနှင့်ချစ်ခြင်း featuring ကတ်များများစွာအဖြစ်တော်ဝင်စုဆောင်း upgrade ။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ယူနှင့်ဆုဖလားအနိုင်ရသူတို့ရဲ့တာဝါတိုင်ကနေရန်သူဘုရငျနဲ့ Princess Knock, Crown နှင့် Arena အတွက်ဘုန်းအသရေ။ ကဒ်များကိုဝေမျှနှင့်သင့်ကအရမ်းကိုယ်ပိုင်စစ်တိုက်အသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်မယ့် Clan ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! Royale ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကစားရန်အခမဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့သို့သော်အချို့ဂိမ်းပစ္စည်းများလည်းအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုရငျ, သင်၏ Google Play Store app ကို၏ setting တွင်ဝယ်ယူမှုများအတွက် password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို set up ပေးပါ။ ဒါ့အပြင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်, သင် play သို့မဟုတ် Royale ထိပ်တိုက်တွေ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အနည်းဆုံးအသက် 13 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ရမည်။
Real-time အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ● Duel ကစားသမားနှင့်၎င်းတို့၏ဖလားယူ
●ပြိုင်ဘက်ရဲ့တာဝါတိုင်ကိုဖွိုဖကျြမြားနှငျ့မော်ကွန်းသရဖူကိုင်ဆောင်သောဝင်ငွေ Crown အနိုင်ရ
●သင့်ကဒ်သင်အကြိုက်ဆုံးတိုက်ပွဲများတပ်များများစွာနှင့်အတူတိုက်ပွဲများတော်ဝင်မိသားစုနဲ့အတူစုဆောင်းခြင်း, စာလုံးပေါင်းနှင့်ကာကွယ်ရေး Build နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်
ထိပ်●မျိုးစုံ Arena မှတဆင့်တိုးတက်မှုအပေါင်းတို့သည်လမ်း
●ကတ်များဝေမျှနှင့်သင့်ကအရမ်းကိုယ်ပိုင်စစ်တိုက်အသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်မယ့် Clan ရဲ့ဖွဲ့စည်း
●ပုဂ္ဂလိက duel ရန်သင့် Clanmates နှင့်မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်မယ်
●တီဗီ Royale အပေါ်အကောင်းဆုံး duels စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောစစ်တိုက်နည်းဗျူဟာကိုလေ့လာပါ
သငျသညျပြဿနာများရှိခြင်းပါသလား? http://supercell.helpshift.com/a/clash-royale/ သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ် http://supr.cl/ClashRoyaleForum သို့မဟုတ်က Settings> အကူအညီနှင့်ပံ့ပိုးမှုသွားသဖြင့်ဒီဂိမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
... Pass ကို Royale မိတ်ဆက်ခြင်း 2.8.0!
•, Pass ကို Royale နှင့်အတူအခွင့်အရေးနဲ့ဆုလာဘ် Emotion ထူးခြားတဲ့မြျှောစငျအအသားအရေရယူနိုင်သော!
•အခွင့်အရေးအော်တိုရင်ဘတ်သော့ဖွင့, န့်အသတ်အထူးစိန်ခေါ် entries တွေကိုနှင့်ထို့ထက် ပို. ပါဝင်သည်!
•ရာသီကဒီမှာများမှာ! တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လ Royale ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များဆောင်တတ်၏,
• Unlock အသစ်များကို Pass ကို Royale တစ်ခုချင်းစီရာသီဆု။ မျှော်စင်အရေပြား, ကတ်များ, ရင်ဘတ်နှင့်ထို့ထက် ပို. !
နယူးကတ်•: တံငါ! အခုအသစ်ဒဏ္ဍာရီတပ်များနှင့်အတူရန်သူများကိုထွေး။
94.65 ကို MB
တိုက်ပွဲများအဘို့အ Toolkit ...
Clan ၏တိုက်ပွဲဖြစ် ...